सुजिता घटनामा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरीले भन्यो यस्ता ४ घटनाले हामीलाई थप सशंकित बनाएको छ – Classic Khabar
July 8, 2021 145
चितवनकी सुजिता भण्डारी मृ त फेला परेको ४ दिन वितिसक्दा पनि प्रहरीले अझै घटनाको कुनै क्लु फेला पार्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । प्रहरीले विहिवार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्न मिल्ने कुनै प्रगती हात नलागेको जनाएको छ । तर आफुहरुलाई अनुसन्धानमा निकै अप्ठेरो पार्ने काम भएको भन्दै प्रहरीले गुनासो समेत गरेको छ ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रहरीका प्रमुख एसपी ओमप्रसाद अधिकारीले न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया चलिरहँदा त्यसलाई पूरा गर्नमा अवरोध खडा गरिएको बताए। काठमाडौंबाट प्लेन चढेर अभियन्ता आउने, युट्युबर आउने, रात कुनै गाउँमा गएर बास बस्ने र समूह खडा गर्नेजस्ता प्रवृत्तिले अनुसन्धानमा असर पुग्यो,” उनले भने । अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने प्रहरी अधिकारी अहिले कर्फ्यु व्यवस्थापनमा खटिनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
Prevआधा घण्टामा आउँछु भनेर घरबाटै ब्वाइफ्रेण्डसँग हिँडेकी २१ वर्षीय बिना आखिर कहाँ बेपत्ता भइन् ? प्रेमी भन्छन्: पैसा झिकेर बाहिर आउँदा उनी थिईनन्
Nextसुजिताको घटना अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी भन्छन्, बाहिरका मान्छे आएर यहाँ के गरिरहेका छन् ? हामीलाई सुजिताको परिवार भेट्न समेत दिँदैनन्